Finfinnee: “Fana Biroodkaastiing Korporet yeroo dura Raadiyoon jalqabu Afaan Amaaraa wajjin sa;atii wal qixa qaba ture. Yeroo booda garuu keessumaa QEERROON Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta;u erga jedhamee as gar malee Hacuucaa jiru – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee: “Fana Biroodkaastiing Korporet yeroo dura Raadiyoon jalqabu Afaan Amaaraa wajjin sa;atii wal qixa qaba ture. Yeroo booda garuu keessumaa QEERROON Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta;u erga jedhamee as gar malee Hacuucaa jiru
Finfinnee: “Fana Biroodkaastiing Korporet yeroo dura Raadiyoon jalqabu Afaan Amaaraa wajjin sa;atii wal qixa qaba ture. Yeroo booda garuu keessumaa QEERROON Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta;u erga jedhamee as gar malee Hacuucaa jiru
Finfinnee: “Fana Biroodkaastiing Korporet yeroo dura Raadiyoon jalqabu Afaan Amaaraa wajjin sa;atii wal qixa qaba ture. Yeroo booda garuu keessumaa QEERROON Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta;u erga jedhamee as gar malee Hacuucaa jiru. Naannoo Oromiyaa keessa FM shan qaba.irra caalaa garuu Afaan Amaaraan akka tamsa;u ajaju. Ispoonsara garuu Biirolee Oromiyaatu godha. TV yeroo banan ammoo tasuma Afaan Oromoo ni didan. Kun tuffii Uummataaf qabab agarsiisa. Ijoolleen kutaa afaan Oromoo yeroo gaafatanittis Oromoon Qonnaan bulaa hedduu qaba isaaf Raadiyoon ni gaha jechuun deebisaniiru. waggaa darbes ijoollee sadi !. Tsahay Daamxoo 2. Muktar Jamaal 3. Taaddasaa Tarrafaa (Gaazexessitoota) waaee qasoo Oromoo gaafattan jechuun ari’aniiru. Dhaabbata kana keessaa OPDO n share guddaa yoo qabaateyyuu kn akka barbaade ajaju garuu Tigireedha. Gaazexessitootni Oromoo mirga tokkollee hinqaban. kanaafuu dhaabbatni Oromoo waliin walitti dhufeenya qabu akka Ispoonsara hingoone doorsisaa maaloo walitti himaatii. hoogganaan kutaa Oromoo Biraanuu Hurrisaa kan jedhamu Tigreef sagada. Dandeettiin utuu hin taiin waan isaaniif basaasuuf aangoo argate. Dhimma kana abbaa feete gaafattee mirkaneeffachuuu ni dandeessa.”
TPLF security is using Diredawa and Harar to launch operation against Qeerroo and have jailed hundreds of them in these two cities. These Qeerroos are still languishing in jails. Although Harar is the capital of east Hararghe, Oromia does not have the authority to enforce laws in the city.
We know Harar city is Oromo in practice but it is given to the Harari on paper. Hararis have some historical right over the walled city but the so called ”Harari Regional state” is nonsense. Any future revision of the FDRE constitution will require to remove Hariri region from list of states. Oromia should offer zonal autonomy to the people of Harari and the walled city.
Amboo yeroo Amma kan fakkaataa:“Ambo hardha simannaa Dr. Mararaaf godhame, amma Dr. Gara Gudar qajeelaniiru”
የኤርትራው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ ገቡ። ውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ አይቶ ኡስማን ሳላህ የአፍሪካ ሕብረትን ስብሰባ ለመሳተፍ አዲስ አበባ መግባታቸው ታውቋል። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ አንድ የኤርትራ ባለስልጣን ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ አይቶ ኡስማን ሳላህ የመጀመሪያ ናቸው
Oromoon waajjira fi namoota farra saba Oromo ta’an hudatti MUKUKULA qabsiisuuf dirqama lammummaa fi mirga guutuu qaba.